Saraakiisha dawladda ama shaqaalaha, shaqaalaha caafimaadka iyo xarumaha caafimaadka-bulshada iyo adeegyada waxay haysteen ilaa Oktoobar 15, 2021 si ay u helaan jadwalka tallaalka bilowga ah oo dhammaystiran. Laga bilaabo Janaayo 30, 2022, qiyaasta xoojisa ayaa lagu dhex daray waajibaadka tallaalka. Waa maxay waqtiyada kama dambaysta ah ee qiyaasta xoojinta? Waa ayo xirfadlayaasha ku lugta leh?
Tallaalka iyo qiyaasta xoojisa waxay ku qasban yihiin xirfadaha qaarkood Febraayo 25, 2022Tranquillus